Miyaan iibiyaa iPhone 12 hadda ama ma sugaa iPhone 13 -ka cusub? | Wararka IPhone
Miyaan iibiyaa iPhone 12 hadda ama ma sugaa iPhone 13 -ka cusub?
Su'aasha weligeed ah marka taariikhahaani yimaadaan waa ta aad ka akhrisan karto cinwaanka: Miyaan iibiyaa iPhone 12 hadda ama ma sugaa iPhone 13 -ka cusub? Xaaladdan jawaabtu way ka duwanaan kartaa iyadoo ku xiran kiiska laakiin hadda waxaan isku dayi doonnaa inaan si uun kula talino si aadan ugu degdegin go'aankan.
Markaan ka hadlayno iPhone -ka waa inaan tixgelinaa dhowr arrimood waana inay qiimo yar ku lumiyaan suuqa in kasta oo moodel cusub soo baxay, laakiin waa run inaad ka heli karto dalabyo xiiso leh iyo Xaqiiqdii waad awoodi doontaa inaad keydiso lacag haddii aad sugto kaliya bilowga iPhone 13 cusub.
Qaar ka mid ah waxyaabaha cusub ee iPhone 13 -ka cusub ayaa muhiim ah sida 120Hz, soo bandhigid had iyo jeer ah, ama kor u qaadida kaamerada, laakiin uma muuqato inaan ku yeelan doonno isbadal weyn aaladdan cusub sida wararka maanta la isla dhexmarayo ... Waxaan arki doonnaa tan kaliya marka la bilaabayo oo hadda waqti yar baa u jira sidaa darteed waxaa wanaagsan inaadan ku degdegin go'aanka maaddaama kharash -dhaafka maaliyadeed uusan ahayn mid yar kiisaska oo dhan.
1 Waqtigan xaadirka ah iPhone -kii hore wuu shaqeeyaa
2 My iPhone si fiican uma shaqeynayo waana inaan beddelaa
3 Talada ugu fiican hadda waa samir.
Waqtigan xaadirka ah iPhone -kii hore wuu shaqeeyaa
Haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha gacmahooda ku jira iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, ama xitaa iPhone X soo jeedintu waa inaad sugto imaatinka iPhone 13 si aad u iibsato. Kani wuxuu noqon karaa talada ugu fiican ee adeegsadayaasha haysta aalad "duug ah" oo raba inay u gudbaan tusaalaha cusub.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii hagaajinta lagu hirgeliyey moodeelka cusub ee iPhone 13 ee la soo bandhigay bishii Sebtember kuma xiisaynayso waxaad had iyo jeer ka heli kartaa moodooyinka iPhone 12 oo leh qiimo hoose, markaa kiiskan haddii iPhone -kaagu si fiican u shaqeeyo waxaa fiican inaad sii haysato ilaa maalinta bandhigga.
My iPhone si fiican uma shaqeynayo waana inaan beddelaa
Xaaladdan oo kale, waxa aad samayn karto waa raadinta dalab xiiso leh oo loogu talagalay iPhone oo ka weyn moodooyinka hadda jira. Waxaa jira heshiisyo iPhone oo la dayactiray kuwaas oo si weyn u isticmaali kara kiisaskan. Sababtu waa mid sahlan, waxaad wax badan ku kaydin doontaa qiimaha waxaadna iibin kartaa isla terminaalka inta aad suuqa ku luminayso lacag yar. Haddii aad u beddesho iPhone 12 maalgashigu wuu sarreeyaa, sidaa darteed kiiskan kuma talinayno inaad iibsato iPhonekan u dambeeya haddii aadan lacag badan haysanama. Maalgashigu wuu ka weyn yahay oo waxaad ku waayi doontaa lacag badan iibsigaaga, dhanka kale haddii aad doorato mid aad qarash garayso ilaa Sebtembar ka dibna aad u iibiso iib waxaa laga yaabaa inaadan lumin lacag aad u badan.
Marka la soo bandhigo tusaalaha iPhone 13, waxaad dooran kartaa midka aad ugu jeceshahay, iPhone 12 oo leh waxoogaa dhimis ah ama toos u aad moodelka cusub. Sidan ayaad had iyo jeer u soo bixi doontaa inaad guuleysato maadaama maalgashigu uu ku jiri doono moodooyinka cusub. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad doorato iPhone 12 oo aad ka tagto 13, laakiin taasi hadda uma maleynayno inay tahay go'aan wanaagsan.
Talada ugu fiican hadda waa samir.
Haddii aadan qabin baahi xad dhaaf ah ama si toos ah maahan sababta oo ah iPhone -kaagu wuu jabay, waxa ugu fiican kiisaska oo dhan waa in la qabto bisha Ogosto oo la sugo soo -jeedinta Sebtember si go'aan looga gaaro. Waan ognahay in ay adag tahay in la filo wax ka gaabiya sidii caadiga ahayd marka aad haysato kamarad jiilkii ugu dambeeyay oo aad rabto, inkasta oo ay run tahay sugitaanka ayaa weli ah ikhtiyaarka ugu fiican waqtigan.
Markaa su'aasha ah Miyaan iibiyaa iPhone 12 hadda ama ma sugaa iPhone 13 -ka cusub? Jawaabtu waxay noqon doontaa sugitaanka bandhigga iPhone 13 ka dibna qiimee haddii aad xiisaynayso inaad iibsato moodelkan cusub ee ay shirkadda Cupertino bilaabi doonto. Dhab ahaantii iibsashada iPhone 12 hadda ma aha ikhtiyaar xun laakiin waa iska cadahay in iPhone 13 uu ku dari doono hagaajin moodalka hadda jira iyo sidaan nidhaahno waxaad ka heli kartaa xoogaa dalab xiiso leh oo ah iPhone 12 marka tusaalaha la soo bandhigo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Miyaan iibiyaa iPhone 12 hadda ama ma sugaa iPhone 13 -ka cusub?
Spotify waxay biloowday Spotify Plus, ka raqiisan laakiin xayeysiisyo leh
GarageBand ee macruufka iyo iPadOS wuxuu ku darayaa Laba Kalfadhi oo cusub oo ka socda Dua Lipa iyo Lady Gaga